Sithetha noAna Rivera Muñiz noFátima Martín Rodríguez, iTorrente Ballester Award 2017 | Uncwadi lwangoku
Sithetha noAna Rivera Muñiz kunye noFátima Martín Rodríguez, iTorrente Ballester Award 2017
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ukhuphiswano kunye neeMbasa, Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Ifoto ephezulu ngoncedo luka-Ana Rivera.
I-Asturian UAna Lena Rivera Muñiz kunye neTenerife UFatima Martin Rodriguez ibiyi abaphumeleleyo kwi-XXIX Torrente Ballester Prize 2017, inikwe okokuqala ex equo kuDisemba ophelileyo. Iinoveli zazo Yintoni abafileyo bathi cwaka y I-engile inkungu bebelifanele ibhaso "lomgangatho wabo wokubhala", ngokwejaji yokhuphiswano.
Sinethamsanqa lokuba UAna Lena Rivera Muñiz kweli qela lababhali lithobekileyo ye-Actualidad Literatura. Namhlanje Sithethile nabo bobabini ababhali malunga nembasa, imisebenzi yabo, amakhondo omsebenzi kunye neeprojekthi ezizayo.
Mandulo Ushicilelo lwe-XXIX lweMbasa yeTorrente Ballester Ibali elikwiSpanish, iyonke yimisebenzi engama-411 engapapashwanga ngababhali abavela kumazwe angaphezu kwe-18 abathathe inxaxheba. Eli bhaso wazalwa ngonyaka we-1989 kwaye unikwe I-25.000 ye-euro kunye nohlelo yekopi ephumeleleyo.
1 UFátima Martín Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1968)
2 UAna Lena Rivera Muñiz (Asturias, 1972)
3 Udliwanondlebe lwethu
3.0.1 Ngaba usagcina ibhaso kunye nempumelelo? Khawusixelele ukuba kwenzeka njani.
3.0.2 Ucinga ukuba yintoni le ibhaso ikuzisela yona ukongeza kuloo mpumelelo kunye nokwamkelwa?
3.0.3 Yintoni onokuyithetha kwizivakalisi ezibini malunga nabafileyo bathule kunye ne-Angle yeHaze?
3.0.4 Zeziphi iiprojekthi ezintsha othatha inxaxheba kuzo?
3.0.5 Ngaba kukho konke ukuzenzisa ngeenoveli zakho okanye uthanda ukubalisa amabali?
3.0.6 Yeyiphi incwadi yokuqala oyikhumbulayo okanye oyifundileyo? Kwaye ngubani oya kukumakisha ngokugqibeleleyo ukuba uzinikezele ekubhaleni?
3.0.7 Ngoobani ababhali bakho abaphambili? Kwaye unefuthe kakhulu emsebenzini wakho?
3.0.8 Ngaba unayo nayiphi na imania okanye umkhwa xa ubhala?
3.0.9 Kwaye xa ugqibile, ngaba ubuza indawo okuyo ukuze ufumane uluvo, ingcebiso okanye ukulungiswa?
3.0.10 Ungazichaza njani izitayile zakho?
3.0.11 Ufunda eyiphi incwadi ngoku?
3.0.12 Ngaba unesibindi sokunika ingcebiso kwabo babhali baqala ukuqala?
UFátima Martín Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1968)
UCanaria, isiDanga seSayensi yoLwazi, kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid, kunye nezifundo eziqalisiweyo zobuGcisa obuhle, kwiDyunivesithi yaseLagaguna. Umbhali we I-engile inkungu, inoveli enikezelwe ngeBhaso leTorrente Ballester 2017, uqeqeshiwe kwiSikolo seCanarian soDalo lweNcwadi. Ufumene iBhaso le-Orola ngamava ngo-2012 kunye nebhaso le-3 kukhuphiswano lweNkcubeko yeMigangatho yeeNdaba ngo-2011. Uphuhlise ukufota kunye neeprojekthi zobugcisa obubonwayo Ukukhanya kwamagama (ukufota kunye nemibongo yehaiku kunye ne-F / 7 Co-ordination Collective kunye nembongi uCoriolano González Montañés), kunye IArchetypes, umsebenzi okhethiweyo kwii-Discoveries PHOTOESPAÑA 2012, phakathi kwabanye.
UAna Lena Rivera Muñiz (Asturias, 1972)
U-Asturian kwaye uhlala eMadrid, unesidanga kwezomthetho noLawulo lwezoShishino kwi-ICADE kunye nombhali woluhlu lwenoveli yomcuphi noGracia San Sebastián. Ityala lakho lokuqala, Oko abafileyo bethuleyo, ngekhe iphumelele ngakumbi ngokunikezelwa kweTorrente Ballester Award 2017 kunye nebhaso lokugqibela lokuwongwa ngembasa kaFernando Lara ngoMeyi waloo nyaka.
Siphakamisa imibuzo yokuba usixelele ngakumbi malunga nomsebenzi wobungcali kunye noncwadi, iiprojekthi zakho zexesha elizayo kunye neminye imiba ethile. Kwaye siyabulela kwangaphambili ngeempendulo zakho ezinomdla ngakumbi.
Ngaba usagcina ibhaso kunye nempumelelo? Khawusixelele ukuba kwenzeka njani.
UAna: Imvakalelo yokubona umsebenzi wakho wamkelwe kwibhaso nodumo lweTorrente Ballester yindawo yokuhlambela engenakuthelekiswa nanto. Lo ngumsebenzi onesizungu kakhulu kwaye uzibona uqondwa ngabantu abaninzi kwaye kwinqanaba lokubhala njengokukhaba kwe-serotonin. Iimeko ezikhethekileyo zeli bhaso zinikwe ababhali ababini ngaxeshanye ziye zaba yinto eyongezekileyo: bandivumele ukuba ndidibane noFatima, iqabane lam, umbhali obalaseleyo, endizokwabelana naye ngezimvo, iiprojekthi namaphupha ekungekho mntu ungaphandle koku Umhlaba kunye nesi sakhiwo singayiqonda kwaye sive.
UFatima: Yayisisiganeko esingalindelekanga esigqithe konke endikulindeleyo. Ndizivezile kolu khuphiswano lukhulu ndiphupha ngokuba yenye yezinto ezilishumi elinesibhozo zokugqibela, kodwa andizange ndicinge ngesi siphumo senoveli yam yokuqala; kusafuneka yenziwe. Umsitho wokuwongwa eLa Coruña ubumnandi kakhulu kwaye iBhunga lePhondo lisixhase kakhulu. Inyaniso yokuba yahanjiswa okokuqala ngababhali ababini ex equo Bekukuhle kakhulu kwaye akuyeki ukunika amaxesha amahle. Umntu endiphumelele naye ibhaso, uAna Lena, ngumbhali omangalisayo noncomekayo. Ukwazi kuthi kusivumele ukuba simanyane ngeenjongo kwaye sitshintshe amava. Ukususela kumzuzu wokuqala, ubumbano beluphelele, kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumthombo wamathuba esabelana ngawo kuwo onke amanyathelo.
Ucinga ukuba yintoni le ibhaso ikuzisela yona ukongeza kuloo mpumelelo kunye nokwamkelwa?
UAna: Ithuba lokufikelela kubafundi, eyona njongo iphambili yale adventure. Kuyandichukumisa ukucinga ukuba umfundi ngamnye ofunda ibali lam uya kulwenza elakhe, azenzele eyakhe i-adventure, kwaye ahluke. Zininzi kakhulu Bathini Abafileyo njengoko abafundi beyifunda kwaye elowo kubo uya kuchitha ixesha elithile yedwa kunye nokucinga kwabo, kunye nabo, kwisaqhwithi semihla ngemihla esisirhuqa sonke.
UFatima: Ndibhalise kwigama ngalinye likaAna.Le ibiyinto engaqhelekanga: ukufumana eli bhaso limangalisayo kunye nokuzalwa kwenoveli yakho yokuqala, eya kuqala ukuhlala kubafundi. Ukongeza, kuye kwandichulumancisa ngakumbi ukukufezekisa ngomsebenzi owenzeka kwiiCanary Islands. Ndicinga ukuba iya kubonelela ngezinto ezinomdla nezingaziwayo zomhlaba wam. Ndiyaqaphela uxanduva olunikwa ngumvuzo wobude obungako kwiiprojekthi zexesha elizayo endizithathela ingqalelo.
Ungathini kwizivakalisi ezibini malunga Bathini Abafileyo y I-engile inkungu?
UAna: Yincwadi yenoveli yeklasikhi, enobuchule bendabuko, enesingqisho esininzi, kunye noxinzelelo, uburharha kunye necala lomntu elinempikiswano elihamba nawe kwimiboniso yakho kwakudala emva kokuyifunda.
UFatima: I-engile inkungu Iphefumlelwe uhambo lwaseFrance lwango-1724 olulinganisa iNtaba iTeide okokuqala. Isilayidi phakathi kohambo lokuhlola kunye nothando oluvela phakathi kwabaxhasi bayo abathathu, izazinzulu ezimbini zaseFrance kunye nebhinqa eliselula laseCanarian, uEmilia de los Celajes.
Zeziphi iiprojekthi ezintsha othatha inxaxheba kuzo?
UAna: Ukubhala inoveli yesithathu kunye nokulungiselela eyesibini, Umbulali uzimele esithunzini sakho, ukuyibonisa abafundi.
UFatima: Phakathi kokubhala inoveli yam yesibini, Abemi baphesheya, kwaye malunga nokuhambisa incwadi yamabali neqela lababhali, Amabali amafutshane kwizibini ezithandekayo okanye amabali adikayo kwizibini ezimfutshane.
Ngaba kukho konke ukuzenzisa ngeenoveli zakho okanye uthanda ukubalisa amabali?
UAna: Injongo yam kukuba nexesha elimnandi kwaye emva koko ndithathe into nabo ngonaphakade. Ndifuna ukunika abafundi bam ibali elibasibekele kakhulu kangangokuba livelise ukucoceka kwengqondo, ukuba bayalibala malunga neengxaki zemihla ngemihla ngelixa befunda, ukuba baliphila ibali ngokungathi lelabo kwaye bayalithatha xa begqibezela eyokugqibela.phepha kunye nencwadi ukuphumla eshelufini. Injongo kukuba umfundi achonge okulungileyo nokubi, ukuze umgca ungacacanga othanda nongathandi ukuxubana, kuba uninzi lwethu alugqibelelanga okanye luyoyikeka. Zizinto zamanoveli ukubuza iinjongo, amanxeba emphefumlo kunye nokutshintsha kobomi obunokuguqula umntu oqhelekileyo abe sisaphuli-mthetho.
UFatima: Khange ndicinge ngokubhala iziza zembali, kodwa ndizifumene ndikhululekile kuzo, ngaphandle kwexesha elininzi lokuba amaxwebhu afuna ukubonwa adle. Kuyachulumancisa ukwakha inoveli, ukufumanisa okungapheliyo, ukwaluka ukuphazamisa, ukuhamba ukubuyela umva, nangaphezulu, olo hambo lwenzekile kuzo zonke iingqondo: ngexesha, kwijografi, kwiimvakalelo. Ndiyabulela kule nkqubo ndidibene nabantu abanomdla kakhulu, ndaye ndaya kwiindawo ezininzi ukuyokuzijonga, ndixabisile idatha endingayaziyo, amasiko, ukuyisebenzisa ngokungasetyenziswanga, ngamafutshane. Kwaye xa ipapashiwe, ndiyathemba ukuba abafundi baya kwabelana ngale adventure kwaye bayiphile kangangoko ndinayo. Qhubeka nohambo, qhubeka ubhale, kwaye konke okufundwayo kuya kuba yinto ephezulu.
Yeyiphi incwadi yokuqala oyikhumbulayo okanye oyifundileyo? Kwaye ngubani oya kukumakisha ngokugqibeleleyo ukuba uzinikezele ekubhaleni?
UAna: Ndisuke eMortadelos ndaya kuAgatha Christie. Incwadi yokuqala endiyifunde ngaye yayi Ikati kwiDovecote, Ndikhumbula ngokugqibeleleyo.
Ndiqale ukumbhalela, ndenzela uAgatha Cristhie. Yonke ingqokelela ibisendlwini yam. Ndisenazo zonke, zikwimeko elusizi ukususela kumaxesha endiwafunde ndiphinde ndiwafunda. Andiqondi ukuba ndingakhetha enye. Ndaye ke ndaya kuGeorge Simenon kunye noMkomishinara Maigret, kuStanley Gardner kunye noPerry Mason kwaye yiyo loo nto yonke inguquko ivela kwisandla sababhali beqhinga lobuchwephesha kude kube namhlanje. Ndiyabathanda ababhali abaziwayo baseSpain kwaye hayi kangako kangangokuba bakhethe olu hlobo, ndibaleka kakhulu kwiiNordics, ezomeleleyo kwaye zijolise kakhulu kubabulali abanengxaki yobuntu, nangona oko kungandinqandanga UStieg Larsson kunye nomlingiswa wakhe ovela eLisbeth Salander okanye aligqibe lonke ingqokelela kaHenning Mankell kwaye abe ngumlandeli womcuphi wakhe uWalander. Ngaba enye inokundiphawula kuhlobo olo? Akukho nto ichasene nobusuku nguDelphine de Vigan. Ngokuyibona nje kwishelufa yam, ndiyaphinda ndivuselele iimvakalelo endizinike zona. Kukuvulwa kwitshaneli yobomi bakhe ngonina we-bipolar, i-traumas yakhe, ukwenzakala kwakhe, iimvakalelo zakhe.
UFatima: Ndikhumbula iincwadi ezazisendlwini katatomkhulu notamkhulu, zazingabafundisi-ntsapho besikolo kwaye zazinezishelufu zabo zigcweleyo. Kwakukho ezininzi: kukho iintsomi, amabali, iziqhulo. Mhlawumbi oyena mntu undithandayo ndiye ndathanda amabali e-adventure kunye neentsomi Ivanhoe. Emva koko kwafika iintsomi zika-Arthurian, iziqithi ezingaqondakaliyo, iihambo ukuya esiphelweni sehlabathi, emajukujukwini okanye kwikamva. Ndikhule kunye noJules Verne, uEmilio Salgari, nditsho idabi laseGaldós lazalisa ihlobo. Kodwa kukho ababhali abathi, xa befunda, babonakalise ngaphambili nasemva kuba bezishukumisile iinkolelo zam. Oku kwenza ukuba kungabikho nto inye xa uzimisele ukubhala. Into enje yaveliswa nguGabriel García Márquez xa ndifunda Ingxelo yokufa eyaxelwa kwangaphambili. Yonke into yayilapho, yayiyindlu yesibane. Ndiyaphinda ndiyifunde kwaye ndihlala ndifunda into entsha kuzo zonke izinto zayo: iyelenqe, umbalisi-mbali, ilali-indalo yabalinganiswa, ulwimi. Konke oku kunongwe ngamayelenqe asebenzayo, kuba kufezekisa umdla rhoqo nangona isiphelo senoveli saziwa. Ethandekayo.
Ngoobani ababhali bakho abaphambili? Kwaye unefuthe kakhulu emsebenzini wakho?
UAna: Uninzi, kodwa ngaphezulu kwayo yonke into ndiyilindele ngolangazelelo incwadi nganye kaJose María Guelbenzu kuthotho lwamapolisa olwalubalaselisa uMariana de Marco, umdlalo ngamnye omtsha waseBrunetti eVenice ekhokelwa nguDonna León, okanye uJean-Luc Bannalec kunye nomkomishinala wakhe uDupin eBrittany French, nasePetra Delicado , e-Barcelona, ​​u-Alicia Giménez-Barlett owandirhintyela kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
UFatima: Akukho namnye umbhali okanye umbhali okukhanyiselayo. Kuyinyani ukuba uGabriel García Márquez yiprodigy. Kodwa umhlaba awuzange uphelele apho, kunoko waqala. Baninzi ababhali abandichukumisileyo, umzekelo, uCortázar, uKafka okanye uLorca.
Ngaba unayo nayiphi na imania okanye umkhwa xa ubhala?
UAna: UVirginia Woolf wayedla ngokuthi umntu wasetyhini kufuneka abe nemali kunye negumbi elilelakhe ukuze akwazi ukubhala iinoveli. Ndidinga ixesha ndithule. Kuthe cwaka iiyure kwaye yonke into iqala ukuphuma. Andazi ukuba ndiza kubhala ntoni, okanye yintoni eza kwenzeka kwinoveli. Yinkqubo emnandi kakhulu kuba ndibhala ndinemvakalelo yomfundi ongaziyo ukuba kuzakwenzeka ntoni kwindawo elandelayo.
Ndikhumbula ngenye imini xa ndandibhalela isiqingatha Bathini Abafileyo ndaye ndagqiba kwelokuba ndiphinde ndifunde lento bendiyinxibile ukuze ndiqhubeke ngokungaguquguqukiyo. Ndingene ekufundeni kangangokuba ndiqalise ukuziva uxinzelelo lomfundi kwaye ndazibuza "Ngaba uX asinguye umbulali?" Kude kube ndiqonda ukuba ndingumbhali kwaye umbulali anganguye nabani na endigqiba kuye. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba andithathi sigqibo, ukuba inoveli ibhaliwe kwikona yengqondo yam kwaye ndiyikhuphela nje kwikhompyuter.
UFatima: INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA. Yintoni uAna eyothusayo? Ilunge kakhulu. Kuyinyani ukuba xa ungena "ekuthambekeni" uzitsiba ukusuka kwinyani uye kwelinye ilizwe elifanayo. Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi isandla sibhala sodwa kwaye uhambisa iyelenqe elihamba emoyeni. Ndineziko lokugxila kwaye ndingabhala naphi na nangayo nayiphi na ingxolo. Ngapha koko, abantu abadibana nam yonke imihla bahlala bendibona kunye nekhompyuter yam. Ndineencwadana zokubhalela kuyo yonke indawo ukuze ndibambe "izityhilelo." Into ekufuneka ndiyicacisile kukuphela kwenoveli. Eminye andiyazi, andizazi izizathu, okanye ngubani, okanye njani, kodwa yonke into eyenzekayo yenzelwe loo nto, umazibuthe otya inoveli yonke.
Kwaye xa ugqibile, ngaba ubuza indawo okuyo ukuze ufumane uluvo, ingcebiso okanye ukulungiswa?
UAna: Ukugqiba kwam, ndineKlabhu yabaThengi, abafunda inoveli kwaye bandixelele ngeemvakalelo zabo njengabafundi kunye neegaffes abazifumana kuyo. Abanye ngabantu abasondeleyo, abanye andibazi nokubazi, kwaye kum bubutyebi. Ndiyakholelwa ukuba ngaphandle kwazo iinoveli zam bezingayi kugqitywa.
Ndinethamsanqa kakhulu lokuba nababhali ababini abakrelekrele abavela kwizizukulwana ezibini ezahlukileyo, uJose María Guelbenzu noLara Moreno, njengabacebisi kwaye elowo nalowo uveza ukungangqinelani kwam kwaye undenza ndibone iimpazamo kwiinoveli zam, ngaphandle kwabo, ngekhe ndize ukufika.ukuze ulungise kwaye upolishe ukuzishiya njengoko umfundi ekufanele ukuba azifumane.
UFatima: Ngexesha lenkqubo yokubhala I-engile inkungu Ndibe neengcebiso komnye wootitshala bam bokubhala, umbhali omkhulu uJorge Eduardo Benavides, oye waba sisikhokelo esihle "sokuchonga" inoveli. Ndenze iqela labafundi abane abanengcwangu abasuka kwindawo endikuyo (umama, umyeni, udade kunye nomhlobo), bonke abohlukileyo kumbono wabo nakwiincasa zabo zoncwadi ezazisebenza njengekhampasi.
Ungazichaza njani izitayile zakho?
UAna: Entsha, enamanzi, ekhawulezayo, yangoku, yanamhlanje. Kwiinoveli zam, umfundi unqumama ixesha elifanelekileyo ukuze achume, izinto zenzeka ngokukhawuleza njengakwisikripthi sikamabonwakude.
UFatima: Kunzima ukuchaza lo mbuzo. Ndingasebenzisa igama elivela kubugcisa beplastiki: intetho. Ndiyathanda ukuphonononga ukungafani kwamagama, amandla awo, ndiyathanda ukudlala nge-synesthesia, izikweko, nangona ndicinga ukuba kule mihla kulula, ulwimi oluhamba ze luxatyisiwe.
Ufunda eyiphi incwadi ngoku?
UAna: Undibamba emzuzwini ongaqhelekanga ukwenzeka: Ndineencwadi ezimbini kwaye inoveli yolwaphulo-mthetho ayikho. Enye yazo Ukufa kukatata nguKarl Ove Knausgard. Yincwadi yokufunda kancinci, ngokucinga, umbhali uvula umnyango omkhulu kwiimvakalelo zakhe kwaye asivumele sijonge ngaphakathi. Esinye isipho esivela kumpapashi weGalaxia, Umntu okrelekrelengu-Xosé Monteagudo. Bayandenzela lonto ndigqibile Ukufa kusekho nguDonna León kunye IOfisi yoBubi NguRobert Galbraith (JK Rowling).
UFatima: Ndinendawo yokungena ebusuku: Intsomi yesiqithi esingenazwi, nguVanessa Monfort, lowo ndiqhubele phambili kakhulu kwaye ndibandakanyeka nabani na, kwaye kulayini, Umbala wobisinguNell Leyson, kunye 4, 3, 2, 1NguPaul Auster.
Ngaba unesibindi sokunika ingcebiso kwabo babhali baqala ukuqala?
UAna: Bayeke babhale izinto abangathanda ukuzifunda, kuba ngale ndlela bayakukholelwa emsebenzini wabo kwaye bazi ukuba ngaphambi kokugqiba sele benomlandeli wabo wokuqala ongenamiqathango. Ngokuqinisekileyo baninzi abantu abathanda okufanayo nabo kwaye baya kuba ngabafundi bakho. Ukuba akunjalo, baba semngciphekweni wokuba umsebenzi wabo awuyi kubathanda okanye nabani na kwaye akukho bali liyifaneleyo loo nto.
UFatima: Owona mbuzo unzima. Kwabo baqala, musa ukuyeka. Luhlanga olude, lokutsala imitya, lokuzifumanisa, lokuqhekeka nokuzibuyisela umva kunye, kodwa alunakunqandwa. Kuya kufuneka siphule intsomi yokoyika iphepha elingenanto. Kuya kufuneka uhlale phantsi ubhale amagama. Ngequbuliso, yonke into iya kuvela. Kwaye xa ibali lizalwa, liphinde ulifunde, ulilungise, ulikhusele, ulikhuthaze kwaye uhambe kangangoko kunokwenzeka, kuba sele sino "hayi" ngaphandle kokwenza nantoni na.
Ewe, siyabulela ngeempendulo zakho kunye nobubele bakho. Kwaye sininqwenelela impumelelo engakumbi kwimisebenzi yenu yoncwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Sithetha noAna Rivera Muñiz kunye noFátima Martín Rodríguez, iTorrente Ballester Award 2017
Ezona ncwadi zibalaseleyo zoncwadi lwaseAfrika
Iincwadi ziya kupapashwa kwi-2018